Mobile ဖုန်းများကြိူးမဲ့ အားသွင်းခြင်းနည်းပညာ အခြေခံပတ်လမ်း ~ Today's Mobile Training & Service Center
Android ဖုန်းများအတွက် အသုံးဝင် Naing Unlocker
Huawei Y625-U32 IMEI & Baseband Fix
Xiaomi ဖုန်းများ TWRP ကနေ Root ရင်း Logo မှာသာရပ်ေ...
Meizu စမတ်ဖုန်းများအတွက် Gapps installer apk ( No ...
Back light way Collection
Samsung Phone များ IMEI မပျောက်ပဲ လိုင်းမတက်လျှင်၊...
ကျောင်းသားတွေအတွက် အိမ်စာတွေကိုကူလုပ်ပေးမဲ့ အထောက်...
Vivo Y15 Speaker error & Deadboot Fix Firmware
iPhone All Schematic Diagrams
Samsung 2016 ဖုန်းအချို့အား FRP Unlock Tutorial Vi...
အသုံးဝင် Mobile စက်ပြားပုံများ
CM2 Crack version 100% Work
Custom Binary Blocked by FRP Lock bypass Firmware ...
Samsung Galaxy Note5အား sboot ဖိုင်သုံးပြီး FRP ...
Xiaomi မှ အလုပ်ထွက်ပြီး ၁ ပတ်အကြာမှာ Facebook သို့...
Redmi Note 1s gucci အား Wifi နဲ့ Bluetooth errorေ...
Cherry Mobile စမတ်ဖုန်း FRP Bypass Video Tutorial
Circuit ပတ်လမ်းအကြောင်း လေ့လာကြရအောင်
Software သမားတွေအတွက် အမိုက်စား Tool Hero apk
Mobile Brand အစုံရဲ့ Firmware link များ
သင့်ဖုန်းကို လွယ်လွယ်ကူကူပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အချက်မျ...
Y610 U00 All Error Fix Firmware 100% Test
စမတ်ဖုန်းများရဲ့ PMU နဲ့ VPH အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Samsung ဖုန်းများ Adb enable ဖိုင်ရယူခြင်းနှင့် Fr...
Chat Feature ကိုထည့်သွင်းတော့မဲ့ Youtube
Galaxy Grand Prime *SM-G530H* Firmware
Xiaomi ဖုန်းများအား Firmware တင်ခြင်းနည်းလမ်းနောက်...
အခြားဖုန်းများနှင့်မတူ Huawei P10 ရဲ့ထူးခြားချက်မျ...
Hello R100 Deadboot / Logo Stop / Imei - All Fix 1...
Miracle Box Crack 8 in 1 Setup
Mobile ဖုန်းများကြိူးမဲ့ အားသွင်းခြင်းနည်းပညာ အခြေ...
Samsung ဖုန်းတော်တော်များများ Zapya Applicationြေ...
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေရာ ၂၁ နေရာမှာ Wifi အခမဲ့အသုံးပြု...
Android တွေအတွက် Root ဘုရင် Kingroot apk v5.0.2 la...
Current တိုင်းတာနည်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း
အသုံးပြု ကြည့်သင့်တဲ့ Android ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် (...
Mobile ဖုန်းများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အသုံးပြု တဲ့ Box မ...
YBS ယဉ်များကို စီးဖို့အခက်တွေ့နေပါသလား ???
2017 Baydin Book Application
Lava Iris 515 Root & Myanmar Font Build-in Firmwar...
Xiaomi MIUI8 Account Remove Firmware များ
Facebook သုံးသူတော်တော်များများ သိချင်ကြတဲ့ နည်းလမ...
One Click Insecure boot Creator Tool
Android စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် Official ထွက်လာပြီဖြစ်တဲ...
Xiaomi Device တွေကိုအလွယ်ဆုံး Screen lock ဖြည်နိုင...
Samsung မှဖန်တီးနေတဲ့ စာအုပ်ပုံစံ ခေါက်ဖုန်းအကြောင...
Huawei G-Play mini Backlight way
MBO Firmware Collection
Kingo Root latest v4.1.7
Xiaomi Mi6ရဲ့ ပုံရိပ်၊ specs နဲ့ ဈေးနှုန်းများေ...
All Mobile Schematics Diagram
Qualcom ဖုန်းတွေကို အလွယ်တကူ imei or meid အလွယ်...
Huawei G6-U00 ​တွေကို EMMC လဲပြီး IMEI , Noti , ...
Samsung Firmware Downloader SamFirm Tool
သင့် Android Phone မှာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ ၅ ခု
Hardware service သမားများလေ့လာထားသင့်တဲ့ Resistor ...
Xiaomi စမတ်ဖုန်းများအတွက် Hex Editor အသုံးပြု ပြီး...
iOS မှာမရနိုင်တဲ့ Android ရဲ့ Feature ၅ မျိုး
မိမိရဲ့ပုံနဲ့အလှဆင်ပြီး Cleander photo လေးတွေပြု လ...
Huawei model အချို့ရဲ့ USB way
MobileGo v8.2 Full version
Digital ဘောပင်ပါဝင်တဲ့ LG ရဲ့ Stylo 3
BoardSoftware Manual Flashing
One Click Background Open &6in 1Network Fix apk
Huawei model အချို့ရဲ့ စက်ပြားအကြောင်း သိကောင်းစရာ...
အားကစားနှင့်အနုပညာသတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖတ်...
Android ဖုန်းများအတွက် Tool များကိုရယူနိုင်မဲ့နေရာ...
Account Manager application update ထပ်မံထွက်ရှိလာ
Animated 3D Knots iOS Software
MTK သုံးစမတ်ဖုန်းတွေကို Miracle Box ( or ) Box Cra...
Redmi Note3Pro အတွက် Mi Account Remove Firmware
Samsung Frp 2016 6.0.2 security patch level Nove...
Xiomi Redmi Note4အား Mi Account Remove ပြု လုပ်ြ...
Mobile ဖုန်းများကြိူးမဲ့ အားသွင်းခြင်းနည်းပညာ အခြေခံပတ်လမ်း
ပြုလုပ်ရ အလွန်လွယ်ကူပါတယ် 26 ဂိတ်၊ 28 ဂိတ် ကွိုင်ကြိုးကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အဟောင်းထဲများမှ ရှာပါ ၊အဒပ်တာ အကျွမ်းများမှရနိုင်ပါတယ်။ တစ်လက်မ သာသာ အရွယ်ရှိတဲ့ပိုက်လုံးတစ်ခုပေါ်တွင် ကွိုင်ကြိုးကို 15 ပတ်တိတိ ပတ်ပါ ထို့ နောက် ကွိုင်ကြိုး၏ လျှပ်ကာကို ဓါးဖြင့်ခြစ်၍ ဂဟေတို့ ကာ ဓါတ်ကြိုးစ ထုတ်ယူပါ။ ပြီးလျှင် 15 ပတ်တိတိ ဆက်ပတ်ပါ။
ကွိုင်ကြိုးဝိုင်း၏ အစ တစ်ဘက်ကို C828 NPN ထရန်စစ္စတာ၏ ကော်လက်တာတွင်ဆက်ပါ။ အလယ်စသည် အပေါင်းဗို့ ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အဆုံးစ တစ်ဘက်ကို 200အုမ်း ရီစစ္စတာ ခံ၍ C828 ၏ ဘေ့ စ်တွင်ဆက်ပါ။ ဗို့ များများ သုံးလျှင် 200အုမ်း ရီစစ္စတာကို 1k သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရမည်။ 1.5 ဗို့ ဆိုလျှင် 200အုမ်း သာသင့်တော်သည်။
နှစ်သက်ရာ npn ထရန်စစ္စတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ညှို့ ယူသည့်ကွိုင်မှာလည်း 15 n ပတ်၍ LED မီးလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ရသည်။ LED မီးလုံးအတွက် ဒီစီဗို့ ဖြစ်ရန်လိုသော်လည်း ယခုပတ်လမ်းသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောကြောင့် လှိုင်းဝက်တိုင်း အလုပ် လုပ်နေမည်။
refer - Aung Phone Kyaw